Revista Geo-Ingeniería & TwinGeo – Segunda Edición – Geofumadas
အောက်တိုဘာ၊ 2019 geospatial - GIS, အင်ဂျင်နီယာ, အကြှနျုပျ၏ egeomates
Nos ha correspondido vivir un momento interesante de transformación digital. En toda disciplina, los cambios están yendo más allá del simple abandono del papelala simplificación de los procesos en busca de eficiencia y mejores resultados. El sector de la construcción es un interesante ejemplo, que movido por alicientes de futuro inmediato como Internet de las cosas y ciudades digitales estáala puerta de re-inventarse en la medida que la ruta de madurez del BIM lo va permitiendo.
La estandarización de BIM hacia el nivel3se complementa tanto al concepto de Gemelos Digitales, que poco difícil ha sido para que empresas como Microsoft encuentren una posición de ventaja en un mercado que antes parecía solamente para ingenieros y arquitectos. En mi caso soy de una generación que vio llegar el CAD como una solución al dibujo convencional y que me costó adoptar el modelado 3D porque inicialmente me parecían más atractivos mis dibujosamano que tediosos renderizados. Y aunque creemos que lo que ahora hacemos con Structural Robot, AecoSIM o Synchro es de lo mejor, volver la miradaa25 años atrás no hace más que convencerme que estamos en el miso punto de inflexión para una gestión contextual más integrada.
ယခုပင် Gemini နိယာမများသည် BIM ရင့်ကျက်မှုအဆင့်ဆင့်၏နည်းစနစ်ကိုအခြားနည်းတစ်ခုဖြင့်ပုံဆွဲနေပုံရသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်အမြွှာဟုခေါ်သည့်အယူအဆအဟောင်းကိုပြန်လည်ရှင်သန်လာပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများမှစတုတ္ထစက်မှုတော်လှန်ရေးဆီသို့ ဦး တည်နေသည်။ Geo-engineering ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏အဓိကအကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ဖော်ပြရန်အတွက်ဖုံးကွယ်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအနေဖြင့် BIM ကို၎င်းသည်၎င်း၏အတွေးအချေါနှင့်အဓိပ်ပါယ်ဖွင့်ဆိုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
Complementamos la edición con ejemplos de innovaciones en el espectro de la Geo-ingeniería por parte de proveedores de software y servicios. Sobresalen los siguientes casos de estudio y artículos:
Drone Harmony ကို အသုံးပြု၍ လမ်းများနှင့် linear အခြေခံအဆောက်အ ဦ များကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစစ်ဆေးခြင်း။
Christine Byrn ကဒစ်ဂျစ်တယ်အဆင့်မြင့်သောမြို့တော်ကိုလိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်နေရာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြသည်။
LandViewer, နှင့်၎င်း၏ browser ကိုမှအပြောင်းအလဲများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ။
အင်တာဗျူးများအရမဂ္ဂဇင်းသည် Synchro၊ UAVOS ဖန်တီးသူများနှင့်José Luis del Moral ၏ပထမဆုံးတီထွင်သူများနှင့်တရား ၀ င်မူဘောင်ကိုအသုံးချသည့်အတုထောက်လှမ်းရေးစီမံကိန်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုများပါ ၀ င်သည်။
... GEO ချဉ်းကပ်မှု၌။
Por otra parte, verala salirse de su esquema convencional de geomensura, y pensar en abordar el reto de acoplar el estándar LADM con InfraXML es más que satisfactorio. La estandarización finalmente ha calado como hilo conductor entre el sector privativo y el código abierto, unos como protagonistas, otros como resignación de que las cosas sucederán con, o sin ellos. Finalmente la ganancia son las experiencias exitosas; por lo que en el campo geoespacial y en continuidad con la línea de Catastro hemos incluido un caso de éxito en la administración de tierras.
ထို့အပြင် embedded ဗီဒီယိုများနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော link များပါ ၀ င်သောမဂ္ဂဇင်းတွင် Airbus (COD3D) မှ Esriri Mobileye, Hexagon (Luciad 2019 နှင့် M.App) တို့နှင့်ပူးပေါင်းပြီး Trimble နှင့် Catalyst ၀ န်ဆောင်မှုများပါ ၀ င်သည်။
Geo-engineering ရောင်စဉ်တွင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအဖြစ်အပျက်များကိုသင့်အားပေးအပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိက ၀ တ်ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စပိန်ဘာသာဖြင့် Geo-Engineering မဂ္ဂဇင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြော TwinGeo ၏ဒုတိယစာစောင်ကိုတင်ပြလိုပါသည်။
Geo-Engineering ကို - စပိန်ဘာသာဖြင့်ဖတ်ပါ
ယခင် Post မှ« Previous နောက်ထပ်တစ်နှစ်၊ နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခု၊ ထူးခြားသောနောက်ထပ်အတွေ့အကြုံ…၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် YII2019 ဖြစ်သည်!
Next Post ၁၅ ကြိမ်မြောက် gvSIG ညီလာခံ - နေ့ ၁နောက်တစ်ခု»